Madaxweyne Farmaajo oo gaaray magaalada Caabudwaaq – XOGMAAL.COM
Madaxweyne Farmaajo oo gaaray magaalada Caabudwaaq
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud.
Safarka Madaxweynaha uu ku tagay magaalada Caabudwaaq ayaa waxaa ku wehlinaya Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf), Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, Wasiiro iyo xildhibaano ka kala tirsan Dowladda Federaalka iyo Galmudug iyo xubno kale.
Magaalada Caabudwaaq waxaa Madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay Maamulka degmada, qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan Waxagaradka iyo Dhalinyarada, Saraakiil Ciidan iyo xubno kale.
Ammaanka magaalada Caabudwaaq ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana sugidda amniga iska kaashanaya Ciidanka Dowladda Federaalka, kuwa Galmudug iyo Ciidanka AMISOM, Ciidamada ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay ku soo qabteen Maleeshiyaad Hub ku dhex sitay magaalada, kahor inta uusa Madaxweynaha gaarin magaalada.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa safarka uu ku marayo magaalooyinka qaar ee dalka waxaa la filayaa inuu ku soo gaba gabeeyo Magaalada Caabud-waaq ee ka tirsan Gobolka Galgaduud.
Baarlamaanka Maraykanka oo laalay miisaaniyada xukuumadda Iyo Xafiisyada oo dhaqaale la’aan noqday
Guddoonka Golaha shacabka oo sheegay cida leh go’aan ka gaarista Maqaamka Muqdisho